ထူးခြားဖြစ်စဉ် Archives - Page6of 115 - Myanmar Fire Services Department
Mountain Stream swelling to the lay-lying land at Thanphyuzayat Township, Mon State
28.8.2020, at about 06:00, Mountain Stream swelling to the lay-lying land due to heavy rain at Thanphyuzayat-Kyikekami Road, Satthit Yard, between Konekadat Village and Kwanthat Village, Satse Village Tract and Sangyi Village. According to the report, at about 10:33,...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၄)၊ အေးမြသီတာဈေးအပြင်ဘက်တန်း၊ သုဓမ္မာတိုက်တန်းတွင် ထ� ....
၂၇.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၅၁၅ အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၄)၊ အေးမြသီတာဈေးအပြင်ဘက်တန်း၊ သုဓမ္မာတိုက်တန်းတွင် လုံးပတ်(၃)ပေ၊ အမြင့်(၂၀)ပေခန့်ရှိ ထနောင်းပင်လဲနေကြောင်း ၀၅၁၈ အချိန်သတင်းရရှိသဖြင့် မြင်းခြံမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ...
Page6of 115« « Previous...45678...203040...Next »